शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार किन खोसिँदै छ? - Everest Dainik - News from Nepal
शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार किन खोसिँदै छ?
काठमाडौं, जेठ १९ । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति तयार पारेको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने किटान गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस शैक्षिक संस्था सधैं आन्दोलनको तारो, ८० लाख विद्यार्थी प्रभावित
प्रदेशले शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा भनिएको छ । शिक्षा नीति मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।